काठमाडौंको मेयरमा उठ्ने र्‍यापर बालेन शाहको घोषणा - हिमाली पत्रिका	काठमाडौंको मेयरमा उठ्ने र्‍यापर बालेन शाहको घोषणा - हिमाली पत्रिका
काठमाडौंको मेयरमा उठ्ने र्‍यापर बालेन शाहको घोषणा
हिमाली पत्रिका प्रकाशित मिती - २९ मङ्सिर २०७८, बुधवार
काठमाडौँ । र्‍यापर बालेन शाहले काठमाडौं महानगर पालिकाको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली जनतालाई खुसी दिन आगामी चुनावमा उक्त पदमा उम्मेदवारी दिने शाहले फेसबुकमार्फत जनाएका हुन् । ३१ वर्षीय शाह स्ट्रकचरल इन्जिनियरसमेत हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब युवाको पालो । हामीले पढे, लेखेको कहिले काम लाग्छ ? हाम्रो काठमाडौं हामी आफैं बचाउँछौं ।’
‘मैले यसबारे सोचेको दुई/तीन वर्ष अगाडिदेखि नै हो । अब चुनाव आउन ४/५ महिना बाँकी छ । सबैले विकास गर्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दै पूरा नहुने सपना देखाए । मानिसलाई खुसी केले दिन्छ भन्ने कुरा नै मेरो चाहना हो । मेरो घर परिवार, जनता, देशलाई के कुराले खुसी दिन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने हो । बाटोको धुलो हटाएर खुसी हुन्छ कि खाल्डो पुरिदिएर खुसी हुन्छ कि ?
मानिसको मनोवैज्ञानिक खुसीका लागि म मेयरका लागि लड्दैछु । मानिस खुसी हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मानिसलाई खुसी बनाउन जे चाहिन्छ म त्यो गर्छु । मैले भनेको कुरामात्र हुनुपर्छ भनेर लाग्दिनँ । मानिसलाई जे कुरा आवश्यकता छ, त्यो कार्यान्वयनको पहल गर्छु ।’